Chitoro cheApple muItaly chichavhurwa muna Chivabvu 19 | IPhone nhau
Chitoro cheApple muItaly chichavhurwa muna Chivabvu 19
Sezvo vhiki dzinoenda, mamwe eApple Stores ayo Apple anayo kutenderera pasirese ari kudzokera kune zvakajairwa, kunyangwe pamaawa akaderedzwa uye kuisa pamberi pevashandi pamusoro pekutengesa, kukoka vashandisi kuti vatenge kuburikidza newebsite.
Parizvino, pamusoro pezvitoro zvakapararira neApple kuChina, kambani inotungamirwa naTim Cook, yakavhura zvakare madhoo ezvitoro mu South Korea, Switzerland, Germany, Austria neAustralia. Inotevera Apple Chitoro iyo ichavhurazve mikova yayo inogona kunge iri muItari.
Sekureva kwepepanhau Repubblica, saMay 19, hafu yeApple Chitoro iyo Apple iri muItaly ichavhurazve mikova yavo. Zvitoro izvo, sekureva kwaApple Insider, zvakatosimbisa kuvhurwa kwavo ndezve muFlorence, Eastern Roma neCentral Sicily, nepo zviri muLeoone nePiazza Liberty muMilan zvicharamba zvakavharwa.
Repubblica inodudza kuburitswa neApple muzvitoro, nguva dzekumirira uye maitiro ehutano, katsamba kanotevera nhungamiro dzakafanana iyo Apple yakambotumirwa kune dzimwe nyika uko zvitoro zvatovhurwa, uye nekwatinogona kuverenga:
Isu tinofara kutanga kugamuchira vashanyi mune zvimwe zvitoro zvedu muItari kubva Chipiri chinotevera. Mumamiriro ezvinhu apo vazhinji vanoshanda nekudzidza kubva kumba, tinotarisira kupa rubatsiro uye rutsigiro rwavanoda.
Yedu pasocial distancing protocol inoreva nhamba shoma yevashanyi kuchitoro panguva, saka tarisiro dzinogona kumuka kune vatengi. Mifungo yedu inoenda kune vese avo vakagumburwa neCOVID-19 uye kune avo vanoshanda maawa makumi maviri nemana pazuva kuti varape, vadzidze uye vaine kupararira kwayo.
Kuvhurwa kwezvitoro, ichapera pavhiki gumi kuti Apple zvitoro muItari zvakavharwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Chitoro cheApple muItaly chichavhurwa muna Chivabvu 19
Maitiro ekuchenesa Teregiramu pane yako iPhone zviri nyore
Foxconn inosangana nemubhadharo wakaderera mumakumi maviri emakore apfuura